Maxkamadda Bossaso oo dhegaysatay dacwadda eedaysanayaal lagu soo eedeeyey falal dambiyeedyo kala duwan. – Radio Daljir
Maxkamadda Bossaso oo dhegaysatay dacwadda eedaysanayaal lagu soo eedeeyey falal dambiyeedyo kala duwan.
Janaayo 26, 2011 12:00 b 0
Bossaso, Jan 26 – Maxkamadda Darajada Koowaad ee magaalada Boosaaso ayaa maanta oo Arbaca ah xukunno kala
duwan ku ridday eedaysanayaal dhowr ah oo ay xeer-ilaalintu horkeentay garsooraha maxkamadda.
Eedaysanayaashan ayaa lagu soo dacweeyay arrimo la xiriira mukhaadaraad, burcad-nimo iyo arrimo la xiriira gaysasho dhaawacyo halis ah.
Ugu horeeyn waxa ay maxkamaddu dhagaysatay dawcad lagu soo oogay eedaysanayaasha kala ah Cabdulqaadir Isaaq Cali, Sharmarke Cabdulqadir iyo Maxamed Cabdi Jabriil kuwaas oo lagu soo qabtay dambiyo la xiriira ka ganacsiga iyo isticmaalka nooc ka mida maandooriyaha.
Xeer-ilaalinta ayaa dacwadda eedaysanayaasha u cuskatay qodobbo la xiriira anshaxa iyo ammaanka. Ka dib markii ay maxkamaddu dhagaystay eedaynta xeer-ilaaliyaha ayaa goorsoorihii qaadayay dacwadda waxa uu xarig u dhexeeya saddex sano iyo bar illaa afar sano iyo waliba ganaax lacageed oo gaaraya 500 oo doollarka Maraykanka ah ku xukumay eedaysanayaasha kala ah Cabdulqaadir Isaaq Cali iyo Sharmakre Cabdulqaadir, halka wax dambi ah lagu waayay eedaysane Maxamed Cabdi Jabriil.
Maxkamaddu waxa kale oo ay xarig afar sano ah ku ridday Cabdifatax Maxamed Xaaji kadib markii ay xeer-ilaalintu ku eedaysay in uu tallaabooyin burcadnimo ah ka gaystay xaafado ka mida magaalada Boosaaso. Xeer-ilaalinta ayaa maxkamadda horkeentay bistoollad ah nooca ay caruurtu ku ciyaaraan taasoo uu eedaysanuhu u istcmaali jiray in uu ku baarto dhibbanayaashiisa.
Maxkamadda Darajada Koowaad ayaa sidoo kale lix sano ku xukuntay eedaysane Siciido Cabbaas Cabdi kadib markii lagu soo eedeeyay in ay biyo kulul ku shubtay halkaana ay dhaawac halis ah oo gubasho ah ku gaarsiisay gabar iyo hoyadeed. Eedaysayanahan ayaa sidoo kale lagu xukumay in ay magdhow ka bixiso dhibaatada jismiga ah ee ay u gaystay gabdhaha is dhalay.
Dhammaan dadka la xukumay maxkamadda horteeda ayay ka qirteen dacwadda ay ku soo oogtay xeer-ilaalinta.
Sucaad Mire Maxamed
Isu-duwaha wasaarada haweenka & arrimaha qoyska ee gobolka Sanaag oo ku baaqday gargaar deg deg ah oo loo fidiyo dadka & duunyada ay abaaruhu saameeyeen.
London, Jan 25 – Kulan ballaaran oo ay jaaliyadda Puntland ee UK ku yeelatay magaalada London ayaa si weyn loogu taageeray go?aankii golaha xukuumadda Puntland ay xiriirka ugu jartey dawladda federalaalka ah ee Soomaaliya.